Mee ka ederede ndi nwe gi dere site na akwukwo ndi okacha amara
Ugbu a ọhụụ: Mkparịta ụka ndị ode akwụkwọ mgbe ha debere iwu ahụ. Mgbaru Ọsọ: impeccable àgwà! Ọrụ a sitere na ogo ogo ogo.
Nowtụ ugbu a!
ahịa Ngalaba reviews banyere anyị
ahịa Nowtụ ugbu a! Ngalaba reviews banyere anyị
Mee ka ederede ederede nke onye nwe gi
Ndi ọkachamara sayensị dere dere ọkachamara. Na anyị ị nweta enyemaka ọsọ ọsọ site na ghostwriter nwere ahụmahụ, agụmakwụkwọ.
Mee ka ọkachamara mara ya - Gini kpatara n’ezie?
Ihe odide nke nna ukwu ahụ na-anọchite anya arụmọrụ nyocha ikpeazụ nke nwa akwụkwọ nnabata nna ukwu edemede Dị ka o kwere mee site na bachelor tesis, n'ihi na ihe gbara ọkpụrụkpụ maka ide edemede a na-eme nke ọma na nna ya ukwu bụ iwebata echiche onwe onye na-adabaghị adaba. Na mgbakwunye na usoro mmụta bachelor kachasị akọwapụta, ogo a chọrọ ọrụ nọọrọ onwe ya na-aza ajụjụ a na-edozighi. Maka ebumnuche a, a na-enyekarị onye a na-amụrụ ihe peeji 60-80 iji gosipụta ihe ọmụma usoro yana ihe ọmụma gbasara isiokwu a. Ihe dị ka ọtụtụ ọrụ bụkwa ihe kpatara ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ji enwe oke ọrụ a na-adọrọ mmasị. Agbanyeghị, ọ ga-ekwe omume ịchọ enyemaka ọkachamara n'ụzọ iwu.
Ide ederede edemede nke onye nna ukwu site n’enyemaka nke ọkachamara
Mana olee otu nha igwe mmadụ si akpa agwa Ndị ghostwriters n'echiche iwu? Ọ kwesịrị na m ga-atụ anya nsonaazụ dịka ihe egwu dị na plagiargi ebe a? Ma ọ bụ na enwere ụzọ iwu kwadoro iji kpọtụrụ Ide ederede ederede nke onye nwe ya ikwe ka enye aka?
N'echiche kachasị, ọ machibidoro ị gafere n'echiche ndị na-enweghị atụ dị ka nke gị. Ma ọ bụghị iji nweta enyemaka n'inweta akwụkwọ na imegharị usoro echiche. Yabụ, enwere ike ịnweta echiche sitere n'aka ndị ọzọ n'egbughị oge ma jiri ya kee ọrụ nke aka gị.
Site n'enyemaka nke ndị ọrụ ọkachamara anyị, ya mere, ọ nweghị nsogbu ịnata enyemaka ọsọ ọsọ na nke doro anya n'ịzụta, ide ihe na ndozi akwụkwọ edemede nke nna ukwu.
"Emechara m nwee akara ugo mmụta nna m ukwu! Ma jiri akara kacha elu."
Nna-ukwu na nchịkwa azụmahịa
Kedu ihe a ga-atụle n'ozuzu ya mgbe ị na-ede edemede edemede?
Emee chie nna ukwu edemede dị ka a bachelor tesis: Nke a na-ekewa n'ime mpempe akwụkwọ mkpuchi, tebụl nke ọdịnaya, ngalaba ederede, ndepụta nke amaokwu na mgbakwunye. Agbanyeghị, usoro ihe ọmụmụ nke nna ukwu ahụ gosipụtara nnukwu ọdịiche na akụkụ ahụ ike, ebe enwere ohere karịa maka ọrụ nnwere onwe.
Ihe omumu na akwukwo ndi ozo di iche site na 40-50 peeji nke ihe omume bachelor rue 60-80 peeji nke nna ukwu. Agbanyeghị, enwere ike ịrụ ọrụ sara mbara karị, n'ihi na nkọwapụta nke oche ebe edere ọrụ a dị oke mkpa ebe a.
N’ihi ya, a na-agbatị oge nhazi maka edemede nke nna ukwu na nkezi nke ọnwa 6, nke bụkwa ihe a na-achọ n’aka na ọkwa dị elu nke tesis ahụ. Iji ghara ichefu ihe mgbaru ọsọ mgbe ị na-ede ụdị ọrụ a, mmadụ ekwesịghị ileghara atụmatụ dị mma anya. Dị ka akwụkwọ agụmakwụkwọ niile, nke a na-anọchite anya usoro na nyocha akwụkwọ dị ukwuu.
Họrọ isiokwu kwesịrị ekwesị dị oke mkpa maka ihe ịga nke ọma nke edemede ahụ nna ukwu
Ebe ọ bụ na Nhazi nke edemede ukwu nke kachasị dabere na ntinye aka gị, a ga-ahọrọ isiokwu ahụ kpọmkwem. Iji nwekwuo mkpali, isiokwu ndị nwere mmasị siri ike n'akụkụ gị na-enyere aka ebe a. Ndi ozo agaghi eleghara anya bu akwukwo ndi edeputara na isiokwu a na nke ndi ichikota ozi iji mekwuo nyocha. Ozugbo edozichara isiokwu ndị a niile nke ọma, ide ederede nke akwụkwọ ahụ nwere ike ịmalite.
Chọọ enyemaka n'oge kwesịrị ekwesị
das Ide ederede akwukwo pụrụ ịbụ ihe na-achọ oké ihe, karịsịa mgbe ọ na-akpata nsogbu. Ọ dị mkpa karịsịa ebe a ịtụle ihe ọmụma na ihe enwetara n'ụzọ ziri ezi. N'ezie, nke a nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu, nke kachasị mfe nnabata site na enyemaka ọkachamara.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara usoro, nkwupụta, nkọwa, na nọmba ziri ezi, biko kpọtụrụ ndị ọkachamara anyị na ngalaba ndị ahụ. Anyị ngwaahịa nke ahụmahụ gbatịrị gafee niile isiokwu ebe na ọmụmụ. Anyị nwekwara obi ụtọ inyere aka na nchịkọta nke ajụjụ ọnụ gụnyere nyocha na anyị ga-enwe obi ụtọ ịmepụta ngwugwu zuru oke maka gị.
Tụkwasị obi na ezi uche, ahụmịhe na ikike nke anyị Ghostwriter ma hapụ onwe gị ịbụ nke gị nna ukwu edemede dee si ọkachamara.
Kwe ka ọrụ gị dee
Oge imechi gị dị nso, ị ka ga-agụ akwụkwọ maka ule na-abịa mahadum ma ị maghị ihe ị ga-eme n'ihi nsogbu oge? Nsogbu adịghị! Site n'aka anyị ị ga - enweta enyemaka sitere n'aka onye ghostwriter nwere ahụmahụ ma tozuru oke, n'agbanyeghị isiokwu a! Ndị ghostwriters anyị nwere nkọwa zuru ezu na nke emelitere nke akwụkwọ ndị dị na mpaghara ọkachamara ha, maara nke ọma n'okwu okwu dị mkpa ma mara otu esi eji usoro akọwapụtara nke ọma iji meziwanye gị nna ukwu edemede erfolgreicher zuru ezu. Na ndị otu anyị n'akụkụ gị, ị nwere ike ịmụ maka ule na-abịanụ ma gharakwa ichegbu onwe gị gbasara usoro mmụta sayensị nke sayensị gị!
Ajuju banyere ihe ndi nwe akwukwo na ihe di nkpa ma oburu na edere ha
Ego ole ka ọ dị maka ide ederede ederede nke nna ukwu?
Ndị edemede anyị na-arụkarị ọrụ nyocha nke nna gị ukwu n'ime ụbọchị 14-31. Dabere na nkọwapụta na isiokwu, nke a bụ onye. Nke a bụkwa ọnụahịa akọwapụtaghị ya nke ọma. N'ihi na n'oge nke onye edemede na-ede akwụkwọ edemede bachelor gị, ọ nwekwara ike ịrụ ọrụ na ngalaba nkeonwe. Buru n'uche ihe na-eri nke Ọdee akwụkwọ pụrụ iche a na-enwetakarị, dịka ọ ga-ewe gị n'otu oge ahụ.
Otú ọ dị, ị nwere ike nweta a arịrịọ anaghị ejikọ ịtọ ma ọ bụ a Hazie a aloiji dokwuo anya ajụjụ niile tupu oge eruo.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji dee edemede nke nna ukwu?
Ndị edemede anyị nwere ike n'ime ụbọchị 14-31 dee akwukwo ndi ozo. Iji a Ide ederede ederede nke nna gị ukwu zuru oke maka gị ga - ewe onye ọkaibe ọkachamara n’ọhịa gị ihe dịka ị.
Akwụkwọ edemede nyere ndị ode akwụkwọ aka na doctorate na ebe obibi, ndị nwere ike idegara gị ezigbo ọrụ. Iji nwee ike ịkwado gị ọkwa dị elu na nke kachasị elu, jụọ nke ọma.
N'ezie, onye ode akwụkwọ nwere ahụmahụ nwere ike ide ederede nna gị ukwu na obere oge, mana nke a ga-ebelata ogo na izu oke nke ọrụ gị.
Onye ga enyere m aka n’egoru onye nwe m?
Na mgbakwunye ndị nkuzi nwere ahụmịhe, ndị dibia bekee na ndị nyocha ị nwere ike ịgba ajụjụ ọnụ, inwere ohere iji soro onye nchịkwa ma ọ bụ onye ode akwụkwọ anyị kwadoro.
Anyị nwere ezigbo ndị ode akwụkwọ nwere doctorates na obibi, yana ndị prọfesọ emeritus nwere ike inyere gị aka na usoro mmụta nna gị ukwu.
Enwere m ike ịkwụ ụgwọ edemede nna m ukwu na obere obere?
Na Papernerds, n’ezie, ị nwere nhọrọ ịkwụ ụgwọ maka edemede nke nna gị ukwu na obere. Obi dị anyị ụtọ Akụkụ nnyefe na ịkwụ ụgwọ akụkụ ndokwa.
Mana, cheta na onye edemede ahụ nwere ike ịrụ ọrụ gị oge niile naanị mgbe akwụchara ya ụgwọ. Ma ọ bụghị ya, ọ ghaghị ịnakwere ọrụ ndị ọzọ dị n'etiti iji nweta ego ya.
Ajuju ndi ozo na azịza ndi ozo banyere ide ihe ederede na nke akwukwo di na anyi FAQ ngalaba.
Ndị ọkachamara na-enyere aka
Ndị editọ anyị bụ ndị ọkachamara agụmakwụkwọ n'ọhịa ha ma mepụta ọrụ sayensị gị dịka uche gị si dị.
Iji nweta enyemaka
ngwa ngwa ogbugbu
Nyefee arịrịọ n'efu ugbu a ma ị ga-enweta ọrụ sayensị gị na ụbọchị ị họọrọ! Anyị na-emejuputa ọrụ gị n’oge.
Mee arịrịọ n'efu
Ọrụ ọ bụla pụrụ iche
Anyị na-enye gị nnwere onwe nnwere onwe pụọ na nrụrụ aka na njehie site na nyocha dị oke mma wee si otú a gosipụta na ọrụ gị bụ nnomi dị elu. Enweghị ederede ọ bụla, enweghị nsonaazụ ọ bụla - ọkachamara ghostwriting.
Rịọ otu ihe pụrụ iche
Akwụkwọ ọ bụghị naanị na-enye gị ngalaba ọrụ a pụrụ ịdabere na ya maka akwụkwọ oge gị, akwụkwọ bachelor ma ọ bụ tesis, mana yana onye editọ nwere ọmarịcha ọrụ nwere ọrụ ide ederede mara mma.
Enweghị imebi iwu - naanị ihe ndị pụrụ iche.
Obi dị anyị ụtọ inyere gị aka ịza ajụjụ gị niile ọbụlagodi tupu ị nye iwu.
Ndị editọ anyị bụ ndị ọkachamara ọkachamara ọkachamara na ndị nkuzi enyere aka na ọtụtụ afọ nwere ahụmịhe n'ọrụ sayensị.
Na-akpọtụrụ ndị otu nkwado nkwado anyị mgbe niile. Ahịa ọrụ dị ezigbo mkpa ka Papernerds.
Can nwere ike ịdabere na ọrụ sayensị nke Akwụkwọ akwụkwọ. Anyị nwere ụkpụrụ nduzi siri ike maka ndị edemede anyị. Enweghị ọrụ ohi, enweghị nsonaazụ ọ bụla.
Chọrọ enyemaka na ọrụ na asụsụ mba ọzọ? Nsogbu adịghị! Ndị otu anyị nwere ọ willụ ga-enwe ọ toụ ịdụ gị ọdụ na mpaghara na asụsụ ndị ọkachamara anyị.
Ezi uche dị ezigbo mkpa na Papernerds. Na mgbakwunye na nkwurịta okwu ezoro ezo na enweghị aha, anyị na-agbaso nchedo data.
Ọrụ sayensị ọ bụla na-agụgharị site na agụmakwụkwọ nke abụọ na nhazi na onye edemede. Sọftụwia ihe nfe na-achọpụta ịpụ iche.
N'ihi enyemaka ngwa ngwa na iru eru sitere n'aka ndị na-ede akwụkwọ, enwere m ike ịkwadebe nke ọma. Daalụ!
Jule H.Ozizi post
Nkwado ndị editọ nke Papernerds.de m nyere ọrụ ụlọ m. Kọntaktị ahụ na-adị mma mgbe niile ma nwee ike.
Site n'enyemaka nke ndị na-ede akwụkwọ, ọ dị mfe ịnweta akwụkwọ edemede maka mahadum m.
Mila S.German dị ka asụsụ mba ọzọ
Daalụ maka nnukwu enyemaka. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ isoro ndị maara ihe ha na-eme na-arụ ọrụ. Enwere ike ịkwado gị!
Filiks M. na nkà mmụta ọgwụ
Ewezuga gi, agaraghm eme oge ikpebe m! Daalụ. 🙂
Enwetara m aka n'ihi na enweghị m ike ịme ya n'oge. Ndụmọdụ m na-anabata m ma na-enyekwa aka na ngalaba mmezi ahụ. Daalụ, jidere ya.
Anya MaxỌrụ mmekọrịta
Nweta onyinye na-enweghị nkwụnye ugbu a
Biko ziga ase ma ọ bụ iwu ọhụrụ si anyị ẹdude ahịa ozugbo gị manager.
Agụọla m usoro na ọnọdụ (https://papernerds.de/AGBs/) na nkwupụta nchedo data (https://papernerds.de/datenschutzerklarung/) wee nabata ha.
NA-ADINGH IN N’ NLỌ AJ .J.
Ihe omuma gi gha anonyere anyi nzuzo mesoo! A na-eme ọrụ niile na-enweghị aha. Site na ịpị “Arịrịọ na-enweghị ọrụ”, M na-enye m nkwenye na nhazi nke onwe m data dị na Nchedo data.
Ọrụ ụmụ akwụkwọ nọmba 1 na Germany
Dee ndị ahịa anyị:
Ọrụ oru ngo
Nna ukwu adian
Maka ndị edemede
Ihe ọ bụla ime na ghostwriting
2000 - 2021, Akwụkwọ edemede.de. Ikike niile echekwabara.
Ugbu a dị ọhụụ: Mgbe etinyere iwu ahụ yana data data dị, mkparịta ụka gị na onye edemede gị na otu n'ime ndị ọrụ ibe anyị na-ewere ọnọdụ ozugbo na ebumnuche nke ị nwere ike ịnye gị ogo impeccable. Ọrụ a gụnyere na ọnụahịa kwa ibe maka enweghị ogo ogo ogo.
Rịọ ego ego 2%!
Ga-achọta ozi na nkwenye ahụ gụnyere mmụba ihe ịga nke ọma, ojiji nke onye na-eweta ọrụ mbupu ozi MailChimp, Mailerlite, ịbanye ndekọ na ikike gị ịkagbu na nkwupụta nchekwa data anyị.